Mwepụta IMEX America: Ike ọhụrụ na ịdị n'otu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Mwepụta IMEX America: Ike ọhụrụ na ịdị n'otu
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ma anyị apụọ - Day 1 IMEX America.
Obodo ihe omume azụmahịa zuru ụwa ọnụ egosila ike na ọnụọgụgụ, na-ezukọta na IMEX America, nke meghere taa na Las Vegas. Ihe karịrị 3,300 ndị na-azụ ahịa zuru ụwa ọnụ na ihe karịrị ụlọ ọrụ ngosi 2,250 debanyere aha ịga ihe ngosi ahụ, na-eme na November 9 - 11 na Mandalay Bay, ma na-edozi ụzọ maka ịmaliteghachi ụlọ ọrụ ahụ.
IMEX America bụ ihe dị ịrịba ama maka ụlọ ọrụ nzukọ bụ ihe omume mba ụwa mbụ ga-emepe ka ebuliri mmachibido iwu njem US.
Ihe omume nke afọ a bụ ihe ngosi afọ iri nke ihe ngosi na-aga nke ọma ma bụrụ nke mbụ n'ime ihe karịrị afọ 2 kemgbe ọrịa a.
Ihe omume a na-ewere ọnọdụ n'ụlọ ọhụrụ ya na Mandalay Bay na Las Vegas, Nevada, na-amalite site taa ruo na Nọvemba 11.
Afọ a IMEX Americe, ihe ngosi nke mbụ n'ime ihe karịrị afọ abụọ, bụ ihe dị ịrịba ama maka mpaghara ahụ dị ka ihe omume mba ụwa mbụ ga-emepe ka ebuliri mmachibido iwu njem US. Ihe ngosi a nwekwara ebe obibi ọhụrụ, Mandalay Bay, ma na-eme mmemme nke iri ya, na-eme ka ụbọchị ole na ole sochirinụ na Las Vegas bụrụ oge pụrụ iche.
Ịzụ ahịa na-anọdụ n'etiti ihe ngosi ahụ na afọ a abụghị ihe ọzọ na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke nhọpụta ndị dị ugbu a mere maka ebumnuche nyocha ma ọ bụ iji kparịta otu ihe omume - ihe ịrịba ama doro anya na ndị na-azụ ahịa na-eme atụmatụ n'ihu n'ebumnobi ịmalite azụmahịa na otu. anya na 2022 na gafere.
N'ihe ịrịba ama ọzọ nke ntụkwasị obi maka mpaghara ahụ, ụlọ ọrụ na-egosipụta 2,250+ nwere njedebe zuru ụwa ọnụ n'ezie, na-agafe mba 200 na-anọchite anya Europe, Latin America na Eshia nọ ọdụ n'akụkụ North America n'ofe ụlọ ngosi (ihe niile 400,000 sq ft!) .
Nke ndị ngosi na-alọghachi, 16% etinyela ego na ọnụnọ buru ibu na ihe ngosi - ụfọdụ, gụnyere Baltimore, EventsAir, Boise na St Louis, abawanyela ohere nguzo ha site na 100% ma ọ bụ karịa ma e jiri ya tụnyere ihe ngosi gara aga na 2019.
Nnọọ na IMEX America.
N'afọ a, ihe ngosi ahụ na-anabata ndị ngosi ọhụrụ si n'ofe ebe a na-aga, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na teknụzụ sitere na A ruo (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) Z gụnyere: Amadeus River Cruises, Hopin, Louisiana, MeetingPlay, Minneapolis, Iberostar Hotel & Resorts na VenuIQ. Mpaghara Tech raara onwe ya nye nke ihe ngosi a bụ nke kachasị ukwuu, na-egosipụta mmụba nke ngalaba ahụ maka, na itinye ego na teknụzụ mmemme.
Carina Bauer, CEO nke IMEX Group, na-ekwu, sị: "Anyị ikpeazụ mere ngosi ihe karịrị afọ abụọ gara aga na anyị malite taa na a zuru ụwa ọnụ roster nke ngosi na ndị na-azụ ahịa, ihe karịrị 200 agụmakwụkwọ sessions, tinyere ọhụrụ ebe. Ịsị na obi dị m ụtọ bụ okwu ekwesighi!
"Mgbe afọ 10 gasịrị Las Vegas dị ka ụlọ nke abụọ, amakwa m na nke ahụ bụ echiche nke ọtụtụ puku mmadụ na obodo anyị ga-ekekọrịta n'izu a. Maka ndị anyị na-ebi ndụ ma na-eku ume nzukọ, ihe omume na njem mkpali, ọ bụ ihe dị ịrịba ama ịhụ ụlọ ọrụ anyị na-agbanyeghachi na ndụ.
"Ọnụ ọgụgụ, nhọpụta na azụmahịa amụọ n'akụkụ, m obi ike na anyị ga-eleghachi azụ na nke a 10 mbipụta IMEX America dị ka a tipping ebe maka ụlọ ọrụ. Digital na ngwakọ n'ụzọ doro anya nwere ebe ha, ma ọ dịghị ihe na-akụda na visceral mmetụta nke ịbụ na show n'ala nzukọ mmekọ, na-azụ ahịa na suppliers si n'ụwa nile na ịmara na-eduga ozugbo na ọrụ e kere eke, ọkachamara mmepe, ụlọ ọrụ ọganihu na kasị mkpa nke ihe niile. , mmetụta akụ̀ na ụba dị mma n'ụwa nile.”
IMEX America na-aga n'ihu ruo Nọvemba 11.